Global Voices teny Malagasy » Mpampihorohoro. Mpikomy. Mpitsoa-ponenana tsy ara-dalàna. Inona no fonosin’ny anarana? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Jona 2019 7:54 GMT 1	 · Mpanoratra Sahar Habib Ghazi Nandika Sylvia Aimée
Avy amin'ny mpampiasa Flickr, delayed gratification. Sary nalaina tamin'ny 25 novambra 2006. Avy amin'ireo rindrin'ny toby fialofana ao Deheisheh ao Betlehema. CC BY-NC-SA 2.0
Ahoana no fihevitrao mikasika ny teny hoe mpampihorohoro, fampihorohoroana sy horohoro?
Zavatra raisintsika am-pahamatorana be mihitsy ato amin'ny GV ireo anarana sy ireo anaram-petaka. Ampahany amin'ny fepetram-pamohantsika : ‘Fantaro tsara ireo anaram-petaka araikitrareo amin'ny olona tsirairay, vahoaka ary ireo vondrona. Apetraho ny fanontaniana mikasika an'ireo teny, anarana, sary na fomba ampiasaina ao anatin'ireo media sy ireo governemanta hafa – ireo anaram-petaka mifandraika amin'ny fepetrantsika sy amin'ireo soatoavintsika irery ihany no ampiasao”.
Mandritra ny resaka mivatana iray nifanaovan'ireo toniandahatsoratra tao amin'ny efitrano famoaham-baovao tamin'ny volana Jolay (manao iray amin'izany isika isaky ny 6 na 8 herinandro), niresaka nikasika an'ireo teny horohoro, fampihorohoroana ary mpampihorohoro, izahay. Nitondra antsika tany amin'ny fandraisana fanapahankevitra ilay adihevitra:
Fadio ny mampiasa an'ireo anaram-petaka horohoro, fampihorohoroana ary mpampihorohoro, raha tsy hoe ao anaty fitanisàna izany.
Ampiasao ny famaritana ny asan'ny tsirairay na ireo vondrona mampiady hevitra fa tsy ireo anaram-petaka.
Manorata andian-dahatsoratra mikasika an'ireo anarana sy ireo anaram-petaka mampiady hevitra ao anatin'ny faritra misy anareo ary manolora hevitra amina endrika GV mba hamaritana ny tsirairay, ny vondrona na ny vahoaka.
Nosorohantsika tsy amin'ny fomba ofisialy ireo teny horohoro, fampihorohoroana ary mpampihorohoro tato anatinìny volana vitsivitsy lasa (raha tsy hoe nampiasaina tao anaty fitanisàna iray izy ireny) satria:
Tsy misy famaritana iraisan'izao tontolo izao momba ilay teny ary ireo famaritana misy dia tena midadasika be.
Rehefa nampiasaina ilay teny, dia matetika ampidirana politika. Ohatra, any Andrefana, toa tsy ampiasaina ireo teny ireo raha tsy ho an'ireo miozolomana. Ampiasain'ireo governemanta fotsiny izy ireo mba hanamelohna ireo hevitra tsy mitovy, sahala amin'ny trangan'ireo blaogeran'ny Zone9 tao Etiopia.
Ny fepetram-pamoahan-dahatsoratry ny GV dia milaza fa tokony hitandrina isika amin'ireo anaram-petaka.
Taorian'ny adihevitra lavabe niaraka tamin'ireo tonian-dahatsoratra ato amintsika, nifanaraka izahay ny hanao ho politikan'ny fitsipiky ny matoandahatsoratsika ny fampiasana ny teny horohoro, fampihorohoroana ary mpampihorohoro.
Mary Aviles, toniandahatsoratray ho an'i Amerika Latina, no nanambara fa ireo media hafa, toa ny BBC, Guardian sy ny Reuters, dia tsy nampiasa an'ireo teny ireo, raha tsy hoe tafiditra anaty fitanisàna iray noho ireo fanamarihana politika vohizin'izy ireo, izay mety handiso ny tantara. Nilaza i Mary fa “matanjka kokoa ireo famaritana asa raha miohatra amin'ireo mpamari-toetra” ary marobe ireo toniandahatsoratra no nitovy hevitra taminy.
Tanya Lokot, toniandahatsoratray ao amin'ny Runet Echo, nilaza fa nipoitra ny fampidirana politika mitovy amin'izany tao anatina trangan-javatra misy eo amin'i Rosia sy Okraina. Miasa tsara mihitsy ireo famaritana mba hialàna amin'ny fampiasàna ny anaram-petaka.
Rezwan, tondiandahatsoratray ao Azia Atsimo, nanampy fa ny teny hoe silamo dia nampiasaina fahatany ka lasa mitovy hevitra amin'ny hoe mpampihorohoro.
Laura Vidal, tomponandraikitray ao amin'ny vondrom-piarahamonintsika any Amerika Latina, dia nampahatsiahy antsika fa ireo teny ireo dia manana dikany samihafa erantany, tokony ho tonga saina tsara amin'izany isika.
Mong Palatino, tonian-dahatsoratray avy ao Azia Atsimo-Atsinanana, dia nitanisa an'i Myanmar, toerana mahabe adihevitra ny fampiasàna ny teny hoe Mpikomy ao anatin'izay hevitra izay. ka mba ialàna amin'izany dia aleon'izy ireo mampiasa ny anaran-tsamirery manokana an'ny vondrona izay voalaza.
Nilaza ny toniandahatsoratr'i Brezila, Taisa Sganzerla, fa isika ihany koa dia mila mitandrina mba tsy hiantso an'ireo vondrona amin'ny fomba izay itiavan'izy ireo hiantsoana azy, satria mety handiso ny fijery io mitovy amin'ny anaram-petaky ny governemanta io.
Niresaka ny fomba izay nitaterantsika ny ISIS aho. Tandremantsika ny mba tsy hiantso azy hoe Fanjakana Silamo, ka hiantso azy fotsiny hoe ISIS sy hamaritra izay maha-izy azy ireo sy izay ataony.
Inona no fonosin'ireo andiana anarana?
Nisarika an'i Mary Aviles, Tanya Lokot, Laura Vidal ary Ellery Biddle ihany koa ilay fifanakalozan-kevitra hieritreritra hoe tokony hamokatra andiana iray ifandrimbonana isika mikasika an'ireo anarana sy ireo anaram-petaka mampiady hevitra ao anatin'ireo toerana misy antsika ary hitondra soso-kevitra amin'ny endrika GV iray mba hamaritana ny tsirairay, ny vondrona na ny vahoaka.
Raha manan-kevitra ianao mikasika an'ireo andiany, azafady mandefasa imailaka iray ho an'ny tonian-dahatsoratrao na ampiakaro fotsiny etoamin'ny bilaogin'ny vondrom-piarahamonina ilay tantara!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/23/140190/